Baidoa Media Center » Madaxweyne Shariif oo la kulmay raisalwasaare Meles Zenawi. (Sawiro)
Madaxweyne Shariif oo la kulmay raisalwasaare Meles Zenawi. (Sawiro)
June 25, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Mudane Sharif Sh. Axmed ayaa galabta la kulmay Ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Mudane Malez Zenawi. Labada masuul ayaa ka wada’hadlay arrimo badan oo quseeya labada wadan, Ra’iisul wasaaraha Ethiopia ayaa uga mahad celiyay Madaxweynaha Somaaliya iyo xukuumadiisa horumarka ay ka gaareen dhinacyo badan, gaar’ahaan dhanka amniga iyo siyaasada.